Azonao atao ve ny milaza amiko ny toerana mety ho lisitry ny lisitry ny lisitry ny backlinks ho ambony?
Fantatra tsara fa ny mizara tsara ao amin'ny Google, ny tranonkala tsirairay dia tokony hanana votoaty goavana sy manan-danja, sehatra fitadiavana SEO tsara, ary mazava ho azy, ny kalitao sy ny lisitry ny lisitry ny lisitra ambony. Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - ny tranonkala bilaogy rehetra tsy mitongilana dia tsy mahafinaritra mihitsy, ary koa ny sisa amin'ny Black Hat. Te-hametraka ny fandrosoana eo amin'ny habaky ny vohikala aho amin'ny alàlan'ny loza mety henjana mety ho voasazy noho ny Google.
Noho izany, andeha isika hijery ny sasany amin'ireo loharanom-baovao an-tserasera manerantany mba hifandray amin'ny. Mariho anefa fa tokony hajaina amim-panajana ny lisitr'ireo tranokala io fahefana ambony io. Tsy maintsy atao daholo ny zava-drehetra - ny zavatra rehetra ilainao dia mandany fotoana kely fotsiny mba handrafetana pejy iray tena tsara amin'ny tsirairay amin'ireny tranonkala ireny alohan'ny hanampianareo farany ny rohy misy anao. Ireto misy sombiny bala sasantsasany hanombohana anao:
Ho an'ny tranonkala tsirairay, fenoy ny tahiry rehetra ilaina (i. f. Ampio lahatsoratra mifanaraka amin'izany, hameno ny bio anao sy ny fizarana hafa ao amin'ny mombamomba anao manokana, hamoaka sary, infografika, fametrahana fanontaniana matetika ary rohy amin'ireo loharanom-pahefana hafa ao amin'ny Internet).
Tadidio fa ny tanjonao dia mamolavola karazana votoaty mahasoa (toy ny infographics, spreadsheets, sns.), izay tokony hifanaraka amin'ny piraofilinao. Raha manao izany ianao, dia hanana rohy tsirairay araka izay azo atao, mba hahatonga azy ho lasa fotony sy mahery kokoa.
Ampiharo ireto toro lalana manaraka ireto lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny tranonkala manerantany:
YouTube -. Tsy ilaina ny manahy, raha tsy misy lahatsary misy anao. Mazava ho azy fa mila mamorona farafaharatsiny iray amin'ny anao manokana ianao, saingy mbola malalaka hizara lahatsary hafa ianao. Ataovy izay hahazoana antoka fa ny raki-tsoratry ny votoaty multimedia rehetra napetrakao ao amin'ny YouTube vaovao dia mifandraika amin'ny rohy misy anao. Amin'izany, aza adino ny mameno ny famariparanao ny pejy (eo ho eo amin'ny 300 eo ho eo no hanao) ary ampidino ny rohy ao amin'ny fizarana misy anao.
Facebook sy Twitter - tsy ilaina lazaina fa saiky ny olon-drehetra dia manana ny mombamomba azy manokana ao amin'ireo sehatra sosialy malaza. Saingy ho an'ny tanjona fanorenana rohy dia tokony hamolavola ny fanentanana manokana na ny pejy fandraisanao manokana ianao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny fametrahana ny rohinao ao amin'ny pejin'ny mombamomba anao, ary ampidiro amin'ny lahatsoratra na valiny mifandraika - na amin'ny tenanao, na ny pejy hafa. Ataovy izay hahazoana antoka fa nofenoinao avokoa ny zava-drehetra ary tanteraho ny fikarakarana rehetra ilaina.
Wikipedia - no anisan'ny loharano tsara indrindra ahafahana mifandray. Mazava ho azy fa tsy asa mora izany. Na izany aza, ataovy izay ahafahana miasa tsara amin'ny fametahana rakitsoratra avy amin'ny Wiki - mendrika ny ezaka mafy ataonao. Ahoana no hanaovana izany? Ny fomba tsara indrindra dia ny mikaroka votoaty malaza misy ifandraisany amin'ny alàlanao ary mitady rohy kapila na references efa ela. Raha manao izany ianao, dia afaka manamboatra ireo hadisoana ireo ary mahazo rohy mankany amin'ny tranonkalanao manokana, izay mametraka fomba tsara kokoa sy tsaratsara kokoa. Mandritra izany fotoana izany, afaka mandeha haingana kokoa ianao ary miasa amin'ny fametrahana references vaovao amin'ny lahatsoratrao manokana. Ataovy azo antoka anefa fa tena ilaina ny votoatinao. Raha tsy izany, ny fanitsiana anao dia tsy maintsy hofoanana tsy ho ela, ary tsy ho ela.
Farany, ireto ny ambiny amin'ireo tranonkala tsara indrindra hahatonga anao lisitry ny lisitry ny lisitra ambony. Manoro hevitra aho manandrana manapa-kevitra ireo loharanom-baovao an-tserasera mba hahazoana rohy tsara avy amin'izy ireo: Google Plus, Pinterest, LinkedIn, SlideShare, Reddit, Vimeo, Flickr, Tumblr, Delicious, Quora, WordPress. Azoko antoka fa ho hitanao fa tena mahasoa ny mifandray amin'izy ireo ny roa amin'izy ireo Source .